मेरो विगतको जीवन प्रतिगमन सत्र पूर्णतया अप्रत्याशित थियो - कल्याण
मैले विगत-जीवन रिगेसन थेरापी गरें र म * * १२ औं शताब्दीको फेमिनिस्ट ट्रेलब्लाजर हुन सक्छु
I Did Past Life Regression Therapy
अल्बर्टो क्युबिलो / गेट्टी छविहरू
मेरो परिवारमा एक चलिरहेको जोक छ कि मेरो बुवा अघिल्लो जीवनमा भिक्षु हुनुहुन्थ्यो (उहाँ मद्यमा अत्यन्त विशाल हुनुहुन्छ र भिक्षुहरूको सिडी सुनेर मजा लिनुहुन्छ)। र जब म मेरो आफ्नै विगतको जीवनहरूको बारेमा सोच्छु (केहि म गर्छु ... केही छैन, तर प्रायः, तर यो कथा लेख्नु अघि मैले यसलाई केहि सोच्दछु), म आफैंलाई वाइकिंग योद्धा वा इजिप्टियन राजकुमारीको रूपमा कल्पना गर्छु। वा हुनसक्छ ग्याटस्बी-स्टाइल स्पाइकेसी मालिक एक शानदार वार्डरोबको साथ।
के मैले कल्पना गरेन, तर विगतका आत्महरू र वर्तमानका आत्माहरू कसरी एकसाथ गाँसिएका थिए, र कति सम्पूर्ण कुरा पारम्परिक चिकित्साजस्तो महसुस हुन्छ। र अझै, त्यहाँ म was ०-मिनेटको सत्रमा मेरो चिन्तामा फसेकी थिएँ विगत जीवन रिग्रेसन थेरापिष्ट अन् बारहम (जुन संक्षिप्त संस्करण हो, जसद्वारा - तिनीहरू सामान्य रूपमा दुई र आधा घण्टा हुन्छन्)।
प्रतीक्षा गर्नुहोस्, विगतको जीवन प्रतिगमन चिकित्सक? हो, तपाईं त्यो सहि पढ्नुहुन्छ। एन २० भन्दा बढि वर्षको लागि एक इजाजतपत्र विवाह र परिवार थेरापिष्ट हो। जसको अनिवार्य रूपमा उनी क्लाइन्टहरूसँग बस्छिन् र उनीहरूलाई यो निर्धारण गर्दछन् कि उनीहरू यो कर्पोरल संस्करण भन्दा पहिले को हुन्, र उनीहरूको तत्काल मानसको अर्थ के हो।
अझै मसँग? विगतको जीवन थेरीपी हामी सबै अनन्त प्राणी हौं भन्ने धारणामा आधारित छ जुन मानव शरीरको श्रृंखलामा पृथ्वीमा शारीरिक जीवन अनुभव गर्दछ। र यी शरीरहरूमा, हामी अनजानमै हाम्रो वर्तमान जीवनमा अनुभव, दृष्टिकोण र सम्बन्ध गतिशीलता बोक्दछौं। कहिलेकाँही यो फाइदाजनक हुन्छ (जस्तै कुनै विशेष प्रतिभासँग), र अन्य समय यो हानिकारक हुन सक्छ (एक पटक न्यूरोटिक, जहिले पनि न्यूरोटिक)। कुरो यो हो: सबैको ब्यागज भयो।
यस विन्दुमा, तपाईंले या त आफ्नो आँखा घुमाउँदै हुनुहुन्छ वा यदि तपाईं लामो समयदेखि आश long्का गर्नुहुन्छ कि तपाईं एक पटक अमेलिया एअरहर्ट ठीक सँगसँगै हुनुहुन्छ भने। म कहाँ विश्वास गर्ने मीटरमा खसे? ठिकै छ, म अनुमान गर्दछु बीचमा कतै। म आफूलाई एकदम व्यावहारिक, तार्किक व्यक्तिको रूपमा सोच्न चाहन्छु। तर म अन्य बारे केही आकर्षक लाग्छ र एक भन्दा बढी अवसर मा मेरो भाग्य बताउन को लागी अनुमति दिए, भूत को यात्रा मा गए र सम्मोहन गएको छ। त्यसोभए, हामी मात्रै भनौं कि म यो चीजहरूमा विश्वास गर्दछु तर मँ गर्दिन हैन यसमा विश्वास गर्नुहोस्, यदि तपाईंलाई मेरो मतलब के हो भनेर थाहा छ भने।
एनको साथ मेरो स्काइप भिडियो सत्रमा हेडि (उनी पनि उनीहरुलाई पर्सनल पर्दछ), म निश्चित रूपमा सशंकित थिएँ। वास्तवमा मैले महसुस गरें कि उनले मेरो बारेमा मेरो बारेमा कतै कथाहरू घुमाउने छन् र मेरा साथीहरूलाई पछि भन्नको लागि मसँग एउटा रमाईलो कथा हुनेछ। मैले महसुस नगरेको कुरा के हो भने म वास्तवमै धेरैजसो कुरा गरिरहेको छु र यो मनोविश्लेषण जस्तो महसुस हुनेछ वू-वू भन्दा।
यो कसरी तल गयो भन्ने कुरा यहाँ छ: हामीले थोरै तयारी कार्य अगाडि नै गरेका थियौं: मैले साधारण प्रश्नहरूको उत्तर दिएँ जस्तो यदि म कहिल्यै सम्मोहन भोगीरहेछु वा मैले ध्यान गरें भने, र एनले मलाई कवर गर्न चाहेको कुनै खास विषय पठाउन आग्रह गरे — भन, एक सम्बन्ध वा एक फोबिया। त्यसोभए हाम्रो सत्रको दिनमा, मैले एनीको निर्देशनहरू पालना गरेँ र आरामदायक लुगा लगाए, अत्यधिक भोकाएको वा थकित भएन र दिनको व्यस्तताबाट तल आउनको लागि आफूलाई दस मिनेट दिएँ।
एकचोटि जडान भएपछि, हामीले के प्राप्त गर्न चाहन्थ्यौं भनेर हामीले केहि मिनेटमा कुराकानी गर्यौं। (मेरो उत्तर: मेरो जीवनको उद्देश्यको बारेमा कुरा गर्न र कुनै लुकाइएको सामर्थ्य वा प्रतिभाहरू पत्ता लगाउन।) एनले मलाई हल्का सम्मोहन अन्तर्गत राख्नुभयो र त्यसपछि मलाई तपाईंको खुट्टामा हेर्ने जस्ता प्रश्नहरू सोध्दै समयमै फिर्ता गर्नुभयो - तपाईं के देख्नुहुन्छ? र तपाईको वरिपरि के याद गर्नुहुन्छ? फेरि, यो मेरो पहिलो hypno rodeo होइन र यो यस्तो थिएन जस्तो कि मैले आफूलाई गहिरो ट्रान्स वा केहीमा भेट्टाएँ। यसको सट्टामा, मैले अल्ट्रा-रिलक्स्ड र खुला महसुस गरें - मानौं कि मेरो मन जहाँ जहाँ चाहिन्छ फिर्ता गर्न स्वतन्त्र छ। यति धेरै कि, जब मैले मेरा खुट्टाहरू तल हेरे, मैले आफ्नो कालो पाँठोको जुत्ता देखिन तर यसको सट्टा भुत्ला छालाको जुत्तामा कताned्ग भएको, हल्का फोहोर मैला खुट्टा देखें। र मेरो सुत्ने कोठाको चार खैरो पर्खालको सट्टामा मैले आफूलाई एउटा पुरानो बजारमा भेट्टाएँ।
र त्यो त पागल भाग भयो: मैले उनलाई १२ औं शताब्दीको दौडान इटालीमा १ year वर्षीया केटीको रूपमा मेरो विगतको जीवनको बारेमा बताउन थालें, जहाँ म एक नारीवादी ट्रेलब्लाजर थियो जसले वंचित महिलाहरूका लागि स्कूल बनाए। हो, म थियो अति उत्तम। र ठीक छ, म निश्चित छु कि यी विवरणहरू मध्ये कुनैलाई एक पुस्तकबाट बाहिर लगिएको थियो जुन मैले हालसालै पढेको छु ( जलिरहेको कोठा केट मोसे द्वारा - म यसको सिफारिश गर्दछु), तर मैले मेरो मुखबाट शब्दहरू भिंग्काइ फेला पारे जुन मैले सामान्य जीवनमा कहिले पनि भन्न नसक्ने थिएँ। (उनी अन्य व्यक्तिको कथाहरूद्वारा सारिएकी छन् र एकल निर्णयले डोमिनो प्रभाव लिन सक्छ।)
सबैजनासँग त्यस्तो सकरात्मक (वा आत्म-महत्वपूर्ण) विगत हुँदैन, यो ध्यान दिएर लायक छ। एनले पछि मलाई एउटी आइमाईको बारेमा बताइन् जसले उनीसँग काम गरी जुन उनको शोध प्रबंध समाप्त गर्न संघर्ष गरिरहेकी थिइन्। उनको विगतको जीवनमा, उनी एक कैदी थिइन जसले उनको हात काटिदिएकी थिइन my मेरो विचारमा एउटा नाकमा उपमा।
तर मध्य युगमा एक जवान केटीको रूपमा मेरो कट्टरपन्थी मार्गमा फर्कनुहोस्। मलाई मेरो धर्मपिता बुबाले पढ्न सिकाउनुभयो जुन त्यस समय महिलाहरूको लागि एकदमै अनौंठो थियो। मैले अपनाएको तथ्य तथ्य पारिवारिक रहस्य हो जुन मैले पछि मात्र पत्ता लगाए। र पछि जीवनमा, मैले विपन्न महिलाहरूलाई एक सुरक्षित आश्रय शिक्षण साक्षरता सिर्जना गरें। मैले कालो कपाल भएको, निलो आँखा भएको मान्छेसित विवाह गरें जसले तरवारको साथ काम गर्थे र साहसी र दयालु व्यक्तित्व राख्थे। (मलाई थाहा छ, मलाई थाहा छ - त्यो वास्तवमा डिस्ने चलचित्रको प्लट हो।) मैले पढाउन जारी राखेँ र मेरा दुई जना बच्चा थिए। हे, म कुनै क्लियोपेट्रा थिएन तर समग्र, धेरै जर्जर थिएन।
सत्रको अर्को भाग पनि कुकिर थियो। आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त गर्न, एनले मलाई एउटा सुन्दर उज्यालो प्रकाशको कल्पना गरेकी थिइन, जुनबाट मलाई एउटा विशेष र मायालु व्यक्तिको भावना देखा पर्‍यो जसले मलाई धेरै जीवन कालमा चिनेको थियो (एनले मलाई भन्यो कि यो कुनै पनि रूप लिन सक्दछ - एन्जेलिक फिगर, एक प्रिय जो पास भयो वा केवल एक रंग वा ऊर्जा)। म यस गाइडलाई विशिष्ट प्रश्नहरू सोध्न सक्षम भयो जस्तो कि 'के मैले यो टुक्रिएको सम्बन्ध मिलाउन प्रयास गरिरहनुपर्दछ?' वा 'म राम्रो आमा हुँ?' गाईडले उत्तर दिए, 'मलाई एक कदम पछि जान र व्यक्तिलाई मेरोमा आउन भन्यो, र हो, म एक अद्भुत आमा हुन्थें।
सम्मोहनबाट बाहिर निस्केपछि एन र मैले सत्रको बारेमा कुरा गर्न केहि समय बितायौं जुन सामान्य भयो र के आयो एकीकृत गर्न।
केही समानान्तरहरू स्पष्ट रूपमा स्पष्ट थिए। मेरो विगतको जीवन पति स्पष्ट रूपमा मेरो वर्तमान जीवन पति थिए (शारीरिक समानता स्पट-अन थियो र दुबै पुरुषहरू / अन्य राष्ट्रियताका थिए)। र तथ्य यो हो कि मलाई पढ्न मन पर्थ्यो मेरो वर्तमान पेशालाई विचार गर्दा अचम्मको कुरो होइन। अहिलेसम्म, मौलिकताको लागि शून्य पोइन्टहरू।
तर यो हेर्नको लागि रोचक थियो कि मेरो विगतको जीवनमा मजा लिने कुराले कसरी समस्याहरू ल्यायो जुन मसँग हाल संघर्ष गरिरहेको छु। विगतका दिन मैले काम र परिवारलाई घिकट्न कडा मेहनत गरें — यस्तो कुरा जुन अहिले मेरो दिमागमा छ जुन म आफ्नो गर्भावस्थाको छैटौं महिनामा छु। र विगतमा मैले केही अचम्मको परोपकारी कार्य गरे, जुन मैले केहि समयको लागि मेरो आफ्नै जीवनमा थप्न चाहन्थें। मैले मेरो मृत आमालाई मेरो आध्यात्मिक मार्गनिर्देशकको रूपमा पनि देखेँ - जसको सल्लाह हालसालै थप गाह्रो भइरहेको छ। फेरि, यी कुनै पनि विशेष गरी अप्रत्याशित थिएन, तर सत्रले मलाई वास्तवमा यी प्रेतहरूको सामना गर्न ठाउँ प्रदान गर्‍यो।
त्यसोभए, के म सोच्छु कि विगतको जीवन प्रतिगमन सत्रले फोबियाहरूलाई निको पार्न सक्छ वा तपाईंलाई कस्तो पेसा हुनु पर्छ भनेर तपाईंलाई बताउँछ? ठिक छ, छैन। तर एक रोचक व्यायामको रूपमा तपाईलाई पिरोईरहेको वा तपाईको आत्मविश्वासलाई बढावा दिइरहेका कुराहरुलाई मद्दत गर्ने। नरक हाँ।
जन्मदिन आइसक्रीम केक
यद्यपि सत्य भनिएको छ, म हुँ थोरै निराश भए कि म एक मिश्री राजकुमारी वा महारानी एलिजाबेथको टाढा भाई नभएको हुँ। हे, हुनसक्छ मेरो अर्को जीवनमा।
सम्बन्धित: मैले आध्यात्मिक माध्यमको साथ भेटें र मैले आशा गरेको कुरा त्यो थिएन
लामो कपाल को लागी स्तरित कटौती
स्कुल बच्चाहरु को लागी राम्रो विचारहरु
आइतबार गर्न केहि चीजहरू
हलिउड प्रेम कहानी चलचित्र
पानी संग chia बीज